सुनको मूल्य घट्यो, कतिमा कारोबार हुँदैछ आज? - Everest Dainik - News from Nepal
सुनको मूल्य घट्यो, कतिमा कारोबार हुँदैछ आज?
२०७६, २७ मंसिर शुक्रबार
काठमाडौंः नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । बिहीबार प्रतितोला ७१ हजार २ सय निर्धारण गरिएको सुन आज ४ सय रुपैयाँले घटेर ७० हजार ८ सयमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै, शुक्रबार तेजाबीको सुनको मूल्य पनि घटेको छ । बिहीबार ७० हजार ९ सय रुपैयाँ प्रतितोला पुगेको तेजावी सुनको भाऊ आज ७० हजार ५ सय निर्धारण गरिएको छ।
याे पनि पढ्नुस साताको पहिलो दिनमै बढ्यो सुनको मूल्य
चाँदीको भाऊ भने आज स्थिर छ । बिहीबार प्रतितोला ८ सय ४० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज पनि सोही मूल्यमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
ट्याग्स: सुनको मूल्य, सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ
नेपालमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ल्याइने
बहरानइनले पनि दियो कोरोनाको खोप प्रयोग गर्न स्विकृति
कोभिडमा पनि बालबालिकाको शिक्षामा ध्यान दिऔंः राष्ट्रपति भण्डारी